"Rusfinance" - inkampani elalisanda kwakhiwa, okuyinto ingenye izinhlangano engcono inhlobo yayo. Kutfutfukisa endaweni lomthengi credit, futhi inikeza izinkonzo eziningi, phakathi lapho kukhona avtokreditovavnie, okuyinto kwaduma njengoba ubuchwepheshe kwentuthuko. Ungasebenzisa futhi i-credit endaweni yokudayisa, ukuthola loan ngokheshi, okuyinto ekahle kakhulu. Le nkampani futhi ukhiqiza i-credit card. Izibuyekezo "Rusfinance Bank" ingabonwa kwi-inthanethi.
Le nkampani ine amaphuzu ehhovisi elise yonkana Russia - emadolobheni 110, kusukela Kaliningrad edorobheni eliseqajana nesiphetho ekupheleni okuphambene - Vladivostok. Inkampani "Rusfinance" kufakwe mhlawumbe ngobukhulu international iqembu zezimali ezonini euro - Societe Generale. Imiphumela 2012 wabonisa ukuthi lokhu inkampani oluthatha indawo yesithathu kule simo by volume kanye nenani imali yemoto. Izindawo lokuqala nelesibili ezathathwa Sberbank futhi VTB24.
Ihhovisi inhloko yendawo credit itholakala e Samara. It okwamanje usunozakwabo mayelana 14.800 futhi amahhovisi ayo e 63 izifunda of Russia. Amahhovisi engeziwe, kukhona 10 esikweletu imali - 127. Bank buthola amakhasimende more and more. Futhi ukukhula yabo inikwe amandla futhi ilukuluku kulabo abangazange wasebenzisa amasevisi ebhange, futhi ziya ziba mandla atholakala izinjini umbuzo "Rusfinance Izibuyekezo." Yezefundo okhula ngamandla, amaphilisi futhi ilungisa hlelo, inombolo imali kanye ukuheha abathengi.
inqubomgomo yenkampani ilula: ukunikeza amakhasimende loans at kwezimo ezimvunayo bobabili. Kunezindlela eziningana umthengi abolekise izinhlelo. Eqinisweni, abanye unga nge ngokweqile encane ukuthenga ifenisha, izinto zikagesi, izimpahla zasendlini kanye nemiphumela siqu, nokunye okuningi.
Esinye nesinye isakhamuzi Russia angathuthukisa izinga lokuphila kwabo sibonga inhlangano inikeza ngamasevisi zezimali embulungeni yonke, nge esitebeleni eside isisekelo. Ukuxhumana namakhasimende, "Rusfinance" (izibuyekezo siliqinisekise) isebenzisa izimiso wemakethe, kuhambisana nemithetho ibhizinisi kanye nemithetho umtsetfo lokhona.
Ukuze ngokwemigomo nezimo ebhange onganikeza loan elikuvumela ukuthenga imoto yanoma yimuphi asenzayo. Kubandakanya nokudayisa kungaba kwenziwe kumuntu. Nge iqoqo ubuncane kwemibhalo banikwa ithuba ukuthola loan for isamba ka 90% kusuka ukubaluleka emotweni. Le nkampani usebenza nge automakers eziningi, okhombisa ukuxhumana ezibanzi ukuthi ukudala izimo ezikahle kakhulu ukusayinwa inkontileka. "Rusfinance Bank" libuyekeza mayelana lolu hlobo msebenzi omuhle kakhulu. Ayikho ukukopela izikimu grey akukaze ukubonwa.
"Rusfinance" iqala Visa credit card. Kukhona isikhathi somusa izinsuku ezingu-50. Inzalo ibalwa kuphela izikweletu yangempela ekhona. Le nkampani iye yasungula uhlelo nezimo ivumela ngaphandle nobunzima sokukhokha imali ebolekiwe futhi ulisebenzise ngokuphindaphindiwe ukuthi.
Ngo "Rusfinance" loan inezici aqukethe yiqiniso lokuthi ekhishwe ke, ungakwazi ukuthenga cishe noma yimuphi umkhiqizo we ezikhiqizelwa ezitolo, inani eyeqa 7000. Amagama loan kuze izinyanga 3-24.
Ukukhishwa imalimboleko ngokheshi
Ikhasimende ungathola loan cash in inani ruble 5 kuya ayizinkulungwane 50 kusukela inkampani "Rusfinance". Izibuyekezo amakhasimende ayo amaningi kungasiza saqala ukuba ngiziqonde kangcono izikhungo kohlelo, nakuba kunjalo elula. Inqubo yokuthola credit ngokheshi lwase lwenziwa lula: isamba sazo zonke izinkokhelo ukuthi kuzodingeka, fixed ekuqaleni bese musa ukushintsha phakathi esingangaleso sokukhokha imali esinqunywe.
"I-ICD" ebhange. Izibuyekezo ochwepheshe kanye abathengi
Isiphuzo enempilo futhi esihlwabusayo - juice kwamagilebhisi ebusika
Okuqukethwe caloric amakhowe futhi ezingenawo umsoco